Ny vokatry ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny fahasalamana ara-tsaina - Victor Mochere
Ny adin-tsaina ara-psikolojika dia ampahany tsy azo ihodivirana amin'ny fiainana. Matetika izany dia vokatry ny antony ivelany toy ny fisaraham-panambadiana, ny fahaverezan'ny asa, na ny loza voajanahary. Izany koa dia noho ny anton-javatra anatiny toy ny olana amin'ny fifandraisana na ny fahasahiranana ara-bola. Na izany aza, amin'ny toe-javatra maro dia tsy hita mazava ny antony mahatonga ny adin-tsaina, ary ny psikology dia manondro izany ho adin-tsaina izay "tsy fantatra" na "tsy azo ihodivirana". Ohatra amin'ny adin-tsaina toy izany noho ny anton-javatra anatiny dia ny finoan'ny tena manokana, ny soatoavina, ny safidiny ary ny saranga sosialy.
Ny firazanana dia rafitra ara-tsosialy izay mitana anjara toerana amin'ny fomba fitondran'ny tsirairay ao amin'ny fiaraha-monina sy ny fomba fandraisany ireo antony ara-kolontsaina ireo. Ny constructivism ara-tsosialy, sampana iray amin'ny psikolojia sosialy, dia ny teoria fa ny fahatsiarovan-tenan'ny olombelona sy ny fitondran-tena dia voataonan'ny fomba fijerin'ny fiaraha-monina sy ny andrasan'ny olona iray na vondrona.
Ny vokatry ny firazanana dia vokatry ny fiheverana ny firazanana sy ny fitondran'ny fiaraha-monina, ary ny fiantraikan'ireo fomba fijery sy andrasana ireo amin'ny fitondrantenan'ny tsirairay. Ireo vokatra ireo dia miseho amin'ny fomba samihafa amin'ny olona tsirairay, ary ny fiantraikan'ny fanavakavaham-bolon-koditra eo amin'ny fahasalaman'ny sain'ny tsirairay. Ny zava-misy dia mbola velona any amin'ny firenena maro ny fanavakavaham-bolon-koditra ary lahatsoratra sy boky ary lahatsoratra maro no nosoratana momba ny fanavakavaham-bolon-koditra.
Ny lohahevitra momba ny fanavakavaham-bolon-koditra dia nanentana ny kabary isan-karazany, ary iray amin'ireo malaza indrindra ny lahatenin'i Martin Luther King Jr. "Manana nofy" aho. Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao sy hahazo vaovao dia hevitra tsara foana ny mamaky lahatsoratra momba ny lohahevitra. Ny tanjon'ny lahateny dia ny handresy lahatra ny Amerikana fa ny olona rehetra dia noforonina mitovy.
Ny fanavakavahana ara-pirazanana mitaiza dia mifandray amin'ny tahan'ny fahaketrahana, ny tebiteby ary ny adin-tsaina eo amin'ny olona miloko. Ny fanavakavahana amin'ny firazanana sy ny lokon'ny hoditra dia miteraka olana maro, toy ny adin-tsaina maharitra, ny fanahiana, ny fahaketrahana, ary ny trauma ara-poko, izay mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainanao andavanandro. Mety misy endrika maro ny fanavakavaham-bolon-koditra. Matetika izy io dia tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo sokajy roa:
Fanavakavaham-bolon-koditra micro - Ity karazana fanavakavaham-bolon-koditra ity dia izay hitanao na iainanao isan'andro eny imasom-bahoaka na any am-piasana na izay hitanao amin'ny hafa. Ny vitsy an'isa dia mety iharan'ny fanorisorenana manjavozavo, manomboka amin'ny fifandonana ara-batana mivantana ka hatramin'ny fanararaotana am-bava. Ny fampijaliana, ny tsy fanajana ary ny fanehoan-kevitra fanavakavaham-bolon-koditra tsy misy tanana dia tafiditra ao anatin'ity sokajy ity
Fanavakavaham-bolon-koditra macro - Ny karazana fanavakavaham-bolon-koditra iainantsika amin'ny lalàna, politika ary fitsipika. Misy fahasamihafana eo amin'ireo tantara ambara amin'ny haino aman-jery momba ny olona miloko sy ny fitsipika mifehy ny andrim-panjakana toy ny rafi-pitsarana, rafi-pitsaboana, rafi-pampianarana, na rafitra ara-bola.
Rehefa mandeha ny fotoana, ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanavakavahana eo amin'ny sehatra micro sy macro dia mety hiteraka fiantraikany ara-pihetseham-po ratsy. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny alahelo, ny fahaketrahana, ny fanahiana, ny eritreritra hamono tena, ny fihenan'ny lanjan'ny tena, ny fikorontanan'ny adin-tsaina aorian'ny trauma (PTSD), ny fahatezerana, ary ny fahalainana. Ny fanalam-baraka ara-poko sy ny fanalam-baraka dia mety hitambatra hamorona izay lazain'ny manampahaizana momba ny trauma ara-poko.
Mety hisy fiantraikany amin'ny olona amin'ny fomba hafa izany. Ny soritr'aretina sasany dia mety hitovy amin'ny aretin'ny adin-tsaina aorian'ny trauma (PTSD). Ny trangan-javatra mampahory iray dia mety hilalao foana ao an-dohan'ny olona ary hisy fiantraikany amin'ny fahasalamany amin'ny ankapobeny. Sarotra ny miatrika ny fanavakavaham-bolon-koditra, ary mety ho sarotra ny mahafantatra ny fomba hamaliana rehefa miteny zavatra fanavakavaham-bolon-koditra.
Na izany aza, zava-dehibe ny mahafantatra ny fiantraikan'ny fanavakavaham-bolon-koditra eo amin'ny fahasalaman'ny sain'ireo niharam-boina. Miresaha amin'ny namanao raha iharan'izany fihetsika izany izy ireo mba hampahafantarana azy fa miandany aminy ianao. Ny fanavakavaham-bolon-koditra dia mety miteraka fahatsapana fahafaham-baraka, fampitahorana ary fanirery, ka ny fahafantarana fa manohana anao ny namanao dia afaka manampy azy tsy hahatsapa ho irery.